Klever Finance | I-Crypto yenziwe yalula nge-KLV kunye ne-KFI
Uluntu lweBlockchain Infrastructure ye-Intanethi
I-Crypto yenziwe yalula.
Joyina inguqu yedijithali namhlanje.
Yakha i-Decentralised Applications kunanini na ngaphambili.
Testnet ngoku iyafumaneka
Jonga iBlockchain Docs
Jonga i-Klever Finance Ecosystem yethu
Injongo ye-Klever Finance kukudala izinto ezintsha, ekulula ukuzisebenzisa, kunye neemveliso ezikhuselekileyo ezixhaswe buchwephesha boontanga kunye ne-blockchain.
Siyinkampani yokurhweba nge-crypto-to-crypto ebonelela ngokhuseleko, urhwebo olungenamda, kunye nolwenzeko olungenamthungo kwihlabathi jikelele.
Inkxaso yenye yamandla ethu amakhulu. Ngeqela lamazwe ngamazwe leengcali zenkonzo, sixhasa zonke iimveliso ngeelwimi ezininzi.
I-Klever inobukho behlabathi jikelele kunye namaqela enkxaso asasazwe ngokubanzi
Sithetha ulwimi lwakho. Iiplatifti ezahlukeneyo kunye neemveliso zibonelela ngomxholo kwiilwimi ezininzi zomthonyama.
Iimveliso ezijoliswe ebantwini kuqoqosho lwe-crypto.
Landela uphuhliso lwethu yendlela.
I-wallet yeenkonzo ezipheleleyo kunye ne-blockchains engaphezulu kwe-20 kunye neempawu ezingapheliyo.
Akukho KYC ifunekayo
Okungakumbi malunga neWallet
Amava okurhweba kumntu wonke. Iyafumaneka kwi-Android / iOS kunye nenguqulelo yewebhu.
Indawo yeMarike yaseKlever
Thenga kwaye uthengise ii-NFTs njengePro
Thenga, wabelane, okanye uthathe inxaxheba kwiiNFTs zepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda
Jonga indawo yeMarike
Ngaba ufuna ukhuseleko olungakumbi?
Yiba neeakhawunti ezininzi zokutyikitya nge
I-Crypto Wallet eluvalelweni enezixhobo ezahlukeneyo zenkampani yakho.
Joyina uluntu lwaseKlever
Ukukhula kunye somelela.
Qiniseka ukuba usilandele kwimidiya yoluntu ukuze uhlale usexesheni.
Twitter Youtube Telegram-inqwelomoya Instagram I-Facebook-f Ingxoxo
Fumana imali kunye noKlever
Indawo yentengiso yeNFT